ရိုး ရိုး ဘ လော့ဂ် : dutiya 's blog မှ ကြိုက်တဲ့ပိုစ့်တခု
ဓါတ်ပုံတွေနဲ့ စာရေးသူရဲ့ တွေးခေါ်ပုံတချို့ ကို စိတ်ဝင်စားမိလို့ ဒီပိုစ့် ကို ကူးယူထားပါတယ်။
မူရင်း Post Link ..."http://dutiya.blogspot.com/2010/04/blog-post_30.html"
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အခြေချ နေထိုင်နေတဲ့ ကရင် တိုင်းရင်းသား အဆိုတော် ယူရီ ဟာ အမျိုးသားချင်း လက်ထပ်ပေါင်းသင်း နေထိုင်နေသူ ဖြစ်တဲ့အတွက် လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက အဖွဲ့ ဝင်အဖြစ်မှ ထုတ်ပယ်လိုက်တယ် ဆိုတဲ့သတင်းကို ဧရာဝတီ site က ဖတ်မိပြီး လူမှုရေး အဖွဲ့ အစည်း တစ်ခုအနေနဲ့ဒီလိုလုပ်တာ မှန်သလား မှားသလား ဘယ်လိုထင်လဲလို့သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်နဲ့သူ့အမြင် ကိုယ့်အမြင် တွေပြောဖြစ်တယ် ။
ကျွန်တော့်ရဲ့အမြင်အရ ဆိုရင်တော့ အဲဒီ အဖွဲ့ အစည်းထဲမှာ သူဟာဘယ်နေရာ ကပါဝင်နေ သလဲ ဆိုတဲ့ အပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ် ။ သာမန် အဖွဲ့ ဝင် တစ်ယောက် အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ လူမှုရေး အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုအနေနဲ့လိင်တူဆက်ဆံ နေသူဖြစ်နေ လို့ဆိုပြီး ခွဲခြားမဆက်ဆံ သင့်ပါဘူး ။ ခေါင်းဆောင် တစ်ဦး ၊ စံပြပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦး အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ အဖွဲ့ အနေနဲ့မမှားဘူးလို့ ထင်ပါတယ် ။ ခေါင်းဆောင် တစ်ယောက် ၊ စံပြပုဂ္ဂိုလ် တစ်ယောက်မှာ လူတိုင်း လက်ခံနိုင်တဲ့ ၊ အတုယူရတဲ့ အမူအကျင့် များသာရှိ သင့်ပါတယ် ။ လူအချို့ သာ လက်ခံနိုင်တဲ့ အမူအကျင့်တွေ ရှိနေတဲ့ သူကို ခေါင်းဆောင် နေရာ ၊ စံပြပုဂ္ဂိုလ် နေရာကနေ ထုတ်ပယ် တာဟာ မမှားဘူးလို့ထင်ပါတယ် ။
လိင်တူ ဆက်ဆံမှုကို လုံးဝလက်မခံတဲ့ သူတွေရှိသလို ၊ နားလည်မှု ပေးပြီး လက်ခံသင့် တယ် ခွဲခြားပြီး မဆက်ဆံ သင့်ဘူးလို့ပြောနေကြတဲ့ သူတွေလဲရှိ ပါတယ် ။ ဟိုမုန်း ပြောင်းလဲမှု ၊ ဟိုမုန်း မညီမျှမှု တွေကြောင့် ယောက်ျားလေး ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မိန်းမစိတ် ပေါက်ပြီး မိန်းကလေးလိုပဲ နေချင်တာ ၊ မိန်းကလေး ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ယောက်ျားလေးစိတ် ပေါက်ပြီး ယောက်ျားလေး လိုပဲ နေချင်တာ တွေကို နားလည်မှု အပြည့်အ၀ ပေးနိုင်ပေမဲ့ ၊ မိန်းကလေး အစစ် ယောက်ျားလေး အစစ် တွေနဲ့တန်းတူ နေရာတိုင်းမှာ လက်ခံပေး ဖို့ဆိုတာ မလွယ်ပါဘူး ။
စိတ်မနှံ့သူတစ်ယောက်ဟာ သာမန်လူ တွေနဲ့အခွင့်အရေး တန်းတူ ရှိသင့်တာ မှန်ပေမဲ့ ၊ သာမန်လူတွေနဲ့တန်းတူလို့လက်ခံလို့မရပါဘူး ။ ဥပမာ - ဆုံးဖြတ်ချက်ချ ရမဲ့ အခြေ အနေ မျိုးတွေမှာ စိတ်မနှံ့သူတွေကို သာမန်လူတွေလို သူ့ ဘာသာသူ ဆုံးဖြတ်ပါစေ ဆိုပြီး လွှတ်ထားလို့မရပါဘူး ။ ခြေထောက် တစ်ဖက်ထဲ ရှိတဲ့ သူတစ်ယောက် ဟာလဲသာမန်လူ တွေနဲ့တန်းတူ အခွင့်အရေးတွေ ရှိသင့်တာ မှန်ပေမဲ့ ၊ သာမန်လူတွေနဲ့တန်းတူလို့လက်ခံလို့မရပါဘူး ။ ခြေထောက် တစ်ဖက်ထဲ ရှိတဲ့ သူတစ်ယောက်ကို သာမန်လူတွေရဲ့ဘော်လုံး အသင်းမှာ ၀င်ကန်ခိုင်းလို့ မရပါဘူး ။
လိင်တူဆက်ဆံသူတွေကို စိတ်မနှံ့ သူတွေ ၊ မသန်စွမ်းသူတွေနဲ့မနှိုင်းသင့်ဘူး လို့ပြောရင် တော့ ဘာဖြစ်လို့ လဲလို့ပြန်မေးပါရစေ ။ စိတ်မနှံ့ သူတွေ ၊ မသန်စွမ်းသူတွေ ဟာ နိမ့်ကျနေသူတွေ မဟုတ်ပါဘူး ။ သူတို့ ကို အဆင့်အတန်း ခွဲခြားတဲ့ စိတ်နဲ့မကြည့် သင့်ဘူး ။ သူတို့ ဟာ သာမန်သူ တွေနဲ့အဆင့်အတန်း တူညီကြတဲ့ သူတွေသာ ဖြစ်တယ် ။ အားလုံး တူညီကြတဲ့သူတွေ ကို အုပ်စု တစ်စုစီ ခွဲရင်သာ သာမန်လူတွေနဲ့အုပ်စု မတူသူ တွေဖြစ်တယ် ။ သာမန် လူတွေကို စိတ်မနှံ့သူတွေအုပ်စုမှာ ထည့်လို့ မရသလို ၊ စိတ်မနှံ့သူတွေကိုလဲ သာမန်လူတွေ အုပ်စုမှာ ထည့်လို့မရပါဘူး ။ တူညီတဲ့သူတွေသာ သီခြားစီ ဖြစ်ရမှာပါ ။
မိန်းမလျာ ၊ ယောက်ျားလျာ တွေလဲ အတူတူပါပဲ ။ မိန်းမလျာ တွေဟာ မိန်းကလေးတွေ နဲ့အခွင့်အရေး တန်းတူရ သင့်ပေမဲ့ မိန်းကလေးတွေနဲ့အုပ်စုတူ သူလို့လက်ခံလို့ မရပါဘူး ။ ယောက်ျားလျာ တွေဟာလဲ ယောက်ျားလေး တွေနဲ အခွင့်အရေး တန်းတူရ သင့်ပေမဲ့ ယောက်ျားလေး တွေနဲ့အုပ်စုတူ သူလို့လက်ခံလို့ မရပါဘူး ။ စိတ်ချင်းတူ ပေမဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ဖွဲ့ စည်းပုံချင်း မတူကြပါဘူး ။ ယောက်ျားလေးဟာ ယောက်ျားလေး အုပ်စု ၊ မိန်းကလေးဟာ မိန်းကလေး အုပ်စု ၊ ယောက်ျားလျာဟာ ယောက်ျားလျာ အုပ်စု ၊ မိန်းမလျာဟာ မိန်းမလျာ အုပ်စု အနေနဲ့သာ လက်ခံရမှာပါ ။ ။
ဒီပုံလေးထဲက အနေအထားကို ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ ?
ဒီပုံလေးထဲက အနေအထား ဆိုရင်ရော ?
ကျွန်တော့်ရဲ့အမြင်ကတော့ ယောက်ျားလျာ ၊ မိန်းမလျာ များကို သီခြား အုပ်စုတွေ အနေနဲ့လက်ခံပါ ။ အဆင့်အတန်း ခွဲခြားပြီး မဆက်ဆံ သင့်ပါ ။ နားလည်မှု အပြည့်အ၀ ပေးသင့်ပါတယ် ။
Posted by ရိုးရိုး at Thursday, May 06, 2010